ODUU AMMEE!! Breaking NEWS!!Dhukkubni Koroonaa Vaayrasii (Corona Virus) 4kiloo galeera! – Kichuu
HomeAfaan OromooTVODUU AMMEE!! Breaking NEWS!!Dhukkubni Koroonaa Vaayrasii (Corona Virus) 4kiloo galeera!
Dhukkubni Koroonaa Vaayrasii (Corona Virus) 4kiloo galeera! Odeessi amma Finfinnee irraa dhufe akka addeessutti Qondaaltoonni Mootummaa Federaalaa olaanoon lama dhukkubichan Shakkamanii Qoratama jiraachuu Odeeffannoo Iccitii Masaraa nu dhaqqabe ni addeessa!!
Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa guyyaa har’aa (Corona Virus) qabamuun beekameera!
Isa malees namoonni biiroo Barnoota Oromiyaa keessa hojjatan 45 ol (Corona Virus) shakkamanii qoratamaa jiraachuun beekkameera!!
Yaa Rabbi Ummata Oromoo nu eegi!!!
#ODUU_AMMEE (Corona Virus Ethiophia keessa babal’ate)
“Hoogganaan Biiroo Barnoota Oromiyaa Vaayirasii Koronaan shakkamanii hordoffiin godhamaafi jira
Ityoophiyaatti lammii Jaappaan tokko dhibee Vaayirasii Koronaan qabamu erga mirkanaa’e booda namootni isa waliin qunnamtii qaban 45 irratti hordoffiin taasifamaa jiraachuu barameera.
Akka odeessi bahe mirkaneessutti namoota hordoffiin irratti taasifamaa jiru keessa baay’een isaani hojjettoota Biiroo Barnoota Oromiyaa ti. Kanaanis Hogganaa BBO Dr Tolaa Bariisoo, I/Aantoota biirichaa Obbo Maammoo Bogaalee fi Obbo Alamaayyoo Asaffaa dabalatee hoggantoonni olaanaa BBO namoota kaanirra adda baafamanii hordofamaa jiru.
Namni lammii Jaappaan kun Ityoophiyaa erga seenee booda dhimma hojiif hoggantoota Biiroo Barnoota Oromiyaa waliin walga’ii gaggeesse waan tureef qunnamtii qabanin shakkaman.” Jedhan
Ambootti wanta har’a tahe Galaalchessaan OBS TV #Olaansaa_Waaqumaa akkasiin barreesse.
“Ganama saatii 2’n Amboo geenye. Amboo waanni nu geesse dhimmadha. Yuunivarsitiin Amboo sagantaa dhimma waldaa Maccaa fi Tuulamaa ilaalchisee qobbesse irratti akka hirmaanuuf waamicha nuuf godhee jennaan dhaqne. Yoo achi geenyuu haalli nu mudatee kan birati. Magaalaa osoo hin galiin yeroo 3 sakata’amne. Yeroo magaalaa Amboo geenyuu humni addaa mootummaan Oromiyaa ji’a ji’aan leenjisee eebbisisaa ture ulaa hundaarra kilaashii camadatanii dhaabbatu. Daandii irras konkolaataa irratti kilaashii camadatanii asii fi achi socho’aa jiru.
Yuuniivarsitii Amboo geenyee gara mooraa galuuf yoo jennuus sagantaan yuunivarsitichii qopheesse dhorkamuu dhageenye.
Sagantaan kun kan dhorkame mootummadhaani jedhani. Mootummaa isa kam akka ta’e qaamni adda baasee beeku waan jiru hin fakkatu. Sababaan sagantichi haafeef maal jettee yoo gaafattee namni kana siin jedhu hin jiru. Harka caalaan nama garuu, saganta yuunivarsitichaa akka hin geeggeffamnee kan taasisee garagarummaa ilaalcha namoota paartii Biltsigiinna jedhuma keessa jiraniin morkii keessa galuun yuunivarsiticha dirqamsisaanii akka hambisan namoonni hidduun kan gungumaan. Namoonni heedduun Oromiyaa bakka adda addaati saganticharratti hirmachuuf dhaqanii dhabanii galani. Ambootti waanni poolisiin humna adda jedhamtuu magaalaa keessatti nama gootu baay’ee nama saalfachisa. Ummaanni achi jiraatu itti bareera.
Nu warra bakka biraatii dhaqeef garuu waan adda nutti ta’e.Maaf kana uffattee, maaliif rifeensa mataa akkatti filattee, guddiifatteef poolisiin qabe nama hidha. Dimookiraasii dhugaa paartiin Taayyeefaa fidan eessaa jira? Baay’ea na dhibe. Amboo nama gaddisiifti. Ijoolleen ishee Oromoon qe’ee isheetti salphinnii fi qaaniin mudatera. Hangan ani beekutti Amboo qe’ee namni gaafa rakkoo fi dhiphinaa itti dheesse mataa jala dhokfatu,Kan gaafa gammaachuu keessa burraqudha.
Qe’ee namni essaa dhuftee ,eessatti dhalattee maal uffattee,maal dibattee akkam rifeensa filatte jedhee itti nama hiraarsuu miti.
Kanaaf akkas jedhanii illee akka sirbaniif nan beeka.
Waddeessii keenya qobboo
Kan maaf murtanii hin qabne
Wal argaan keenya Amboo
Kan maaf dhuftanii hin qabne.
Har’a garuu warri aangoo fi qawwee harkaa qabu maqaa Amboon daldalaa jiru.
Rifeensa akkatti sirreeffattu isatu siif murtessa.
Essaa dhufteef sagal dhaabee si gaafata.”